जिल्ला प्रशासन कार्यालयका मुख्य कार्य
कार्य सम्झौता प्रगति विवरण
त्रैमासिक प्रगती विवरण
घुम्ती शिविर स‌ंचालन
नेपाल सरकारकाे अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिएका र सट्टा भर्ना दिएका घर जग्गाकाे विवरण
सन्धी सम्झौताकाे विवरण
सन्धी सम्झौता कार्यान्वयनकाे अवस्था
राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी जिज्ञासाहरु
१) राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको के हो ?
राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको नागरिकहरुको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश भएको राष्ट्रिय पहिचान सहितको बायोमेट्रिक सुविधायुक्त बहुउपयोगी प्रमाणपत्र हो ।
२) राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण बिभागको स्थापनाको उद्देश्य के हो ?
३) राष्ट्रिय परिचयपत्रमा के के विवरण समावेश हुन्छ ?
४) राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको उद्देश्य के हो ?
५) राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनका लागि कस्तो योग्यता चाहिन्छ र प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ?
६) राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट नेपाली नागरिकलाई के फाइदा हुन्छ ?
७) राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगकर्ता को को हुन सक्छन् ?
८ ) राष्ट्रिय परिचयपत्र कहाँबाट वितरण गरिन्छ ?
९) जैविक तथा वैयक्तिक पहिचान भनेको के हो ?
१०) चिप्स भनेको के हो र किन प्रयोग गरिन्छ ?
११) राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने व्यक्तिगत विवरणहरूको गोपनीयता कसरी सुनिश्चित
गरिएको हुन्छ ?
१२) राष्ट्रिय परिचयपत्र हराएमा कसरी प्रतिलिपि लिन सकिन्छ ?
१३) नागरिकता नभएको व्यक्तिले कसरी परिचयपत्र पाउँदछन् ?
१४) राष्ट्रिय परिचय नम्बर भनेको के हो ?
१५) राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा कुन कुन निकायको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
१६) राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु भएपछि नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रयोग कसरी गरिन्छ ?
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय प्रदेश नं. ५
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-01-29 18:14:55
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठान